IRealReview: Qokelela ukuPhononongwa ngokuKhawulezayo kwaye ukhulise udumo lweShishini lakho kunye nokuBonakala | Martech Zone
Ngale ntsasa bendidibana nomthengi oneendawo ezininzi kwishishini labo. Ngelixa ukubonakala kwezinto eziphilayo kwakusoyikisa kwindawo yabo, ukubekwa kwabo kuGoogle Ipakethe yemephu Icandelo lalilihle.
Yinto eyahlukileyo ukuba uninzi lwamashishini lungaqondi ngokupheleleyo. Amaphepha eziphumo zeinjini yokukhangela enamacandelo amathathu aphambili:
UPhendlo oluHlawulweyo -Ichazwe ngumbhalo omncinci othi Intengiso, iintengiso zihlala zibonakala phezulu ephepheni. Ezi ndawo zibhidi kwi-real-time kwaye umthengisi uhlawula ngokunqakraza okanye ngomnxeba.
Ipakethe yeMephu - imephu enobungakanani obubalulekileyo yeyona nto ibalulekileyo kwiphepha kwaye babonisa amashishini, amanqaku abo kunye nolwazi olongezelelweyo. Ukubeka kweli candelo kumiselwe kukulinganiswa kweshishini, uphononongo kunye nomsebenzi wopapasho kwiphepha labo leShishini kuGoogle.
Usesho Lwemvelo - Kumazantsi ephepha ziziphumo ze-organic, amakhonkco kwiwebhusayithi yokwenyani yeenkampani ezinesalathiso, kunye nokuhlelwa kakuhle kwimigaqo efakwe ngumsebenzisi wenjini yokukhangela.
Ukulawula iPakethi yeMephu ye-SERP
Njengoko ubona kuchaziwe apha ngasentla ... igama lesizinda sakho xa kuthelekiswa nedumela elisekwe kuphononongo kunye nomsebenzi kwiphepha lakho leshishini likaGoogle zahluke ngokupheleleyo. Ngapha koko, unokufumana enye ngaphandle kwenye (nangona ndingayicebisi).
Isizathu sokuba lo mthengi asebenze kakuhle kukuba kwiminyaka embalwa edlulileyo babeka iinkqubo endaweni yokucela ukuphononongwa kwi-Intanethi kubo bonke abathengi ababasebenzisileyo. Njengokuba beqala ukuqokelela uphononongo… baqala ukubona inani lokudluliselwa lonyuka kwiinjini zokukhangela.
Ukuba ungumnikezeli ngenkonzo yendawo okanye indawo yokuthengisa, uphononongo lubalulekile kwimigudu yakho yentengiso yedijithali. Ayisiyiyo kuphela ingxelo entle yokuphucula ishishini lakho, ukugcina ukubonwa okubalaseleyo kuya kutsala abathengi ngakumbi nangakumbi. Ukuba awunayo indlela yokuqokelela ngokulula uphononongo, kuya kufuneka ubhalise ngokupheleleyo kwinkonzo efana nale Uphononongo lwenene.
Amanqaku okuQokelelwa kweRealReview
Uphononongo lwenene yenza ukuba kube lula kumashishini ukucela uphononongo lwayo nayiphi na iwebhusayithi, ukufumana ingxelo ngokuthe ngqo kubathengi, kunye nokuphucula uphononongo lwe-Intanethi. I-TrueReview yenza ukuba amashishini athumele uphononongo lweSMS kunye ne-imeyile okanye izicelo zophando, ezenza kube lula kubathengi ukuba banikeze ingxelo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, unokufumana ukuphononongwa okungalunganga ukuqinisekisa ukuba ingxaki isonjululwe.
Izicelo zeSMS -Thumela izicelo zokuphononongwa ngeSMS ezenziwe kwideshibhodi yakho. Abathengi bakho baya kufumana ikhonkco lesiko lokushiya uphononongo kwiiwebhusayithi ozichazayo.
Izicelo ze-imeyile -Thumela izicelo zokujonga kwakhona nge-imeyile ngqo kwideshibhodi yakho. Abathengi bakho baya kufumana ikhonkco lesiko lokushiya uphononongo kwiiwebhusayithi ozichazayo.
Thumela izicelo ngobuninzi - Ukuthumela izicelo zokuphononongwa nganye nganye kudla ixesha. Ngenisa abafowunelwa bakho nge-CSV kwaye uthumele amakhulu ezicelo zokuphononongwa ngaxeshanye.
Imikhankaso yeDriphu -Fumana okuninzi kwisicelo sakho sokujonga ngokuzenzekelayo ngokwenza imiyalezo ye-SMS kunye ne-imeyile. IRealReview yenza ukuba kube lula kakhulu ukwenza iphulo lokuhambisa ngokwenzekileyo kubathengi bakho.
Gwema ukujonga okungalunganga -Abathengi abonwabileyo bashiya uphononongo kwaye abo bangonelisekanga banokunika ingxelo ngokuthe ngqo, okanye banxibelelane nawe ukuze wenze izinto zilunge. Sukuvumela abathengi abacaphukisayo bashiye uphononongo olubi kunye nokonakalisa igama lakho kwi-Intanethi!
Qokelela Ingxelo -Bonisa iiwebhusayithi zakho zokuphononongwa ukuba iziphumo zophando zilungile, okanye ubonelele ngendlela ekhawulezayo kubathengi bakho ukuba banike ingxelo ngokuthe ngqo ukuba iziphumo zophando bezingalunganga.
Ukuphonononga iiSayithi Ukuphonononga iisayithi esele zilungiselelwe zibandakanya uGoogle, u-Facebook, u-Yelp, uLuhlu luka-Angie, i-Foursquare, i-Yellow Pages, i-Zillow, i-Compass, i-Realtor.com, i-Redfin, i-Amazon kunye nokunye. Kwaye ukuba enye ayikho, unokongeza ikhonkco lokujonga kwakhona!
Jonga kwaye uphendule -Kunye neRealReview, unokujonga kwaye uphendule kulo lonke uphononongo lwakho olusembindini weqonga labo.
Unxibelelaniso -Dibanisa isoftware yakho yeCRM oyithandayo ukuze uthumele ngokuzenzekelayo izicelo kubathengi bakho, okanye wenze abafowunelwa abatsha kwiphepha lakho loqhakamshelwano nanini na ugqibezela umsebenzi, vala itikiti, ubhatalelwa inkonzo, nokunye okuninzi! Umdibaniso ubandakanya iGoCanvas, Ukuqeshwa kukaSetmore, abafowunelwa kuGoogle, iHallcall Pro, iSikwere, iJobber, iiRegmasters zeReal Estate, i-ServiceTitan, i-Mailchimp, iiSpredishithi zikaGoogle, iHubspot, ukuCwangciswa koBuchule, i-LionDesk kunye nokunye.
Qalisa ukulingwa kweentsuku ezili-14 simahla
Ukubhengezwa: Ndililungu le Uphononongo lwenene kunye nokusebenzisa ilinki yam yokunxibelelana kulo lonke inqaku.
tags: Ukucwangciswa kobunzimaizicelo zokujonga kwakhonaukuqokelela uphononongoingxelo yabathengiuphononongo lwe-imeyileGoCanvasOxhumana nabo beGoogleAmaSpredishithi eGoogleIHousecall ProhubspotUmsebenziIngonyamaDeskmailchimpipakethe yemephuuphononongo olubiUphengululo lwe-IntanethiAbaphathi beeNdawo zokuThengisa izindluReviewsServiceTitanUkutyunjwa kweSetmoreUphengululo lwesmssikwereZophandoukujonga
Iindlela zokuThengisa ngeVidiyo ze2021
Uzibhala njani kwaye uzivavanye njani iiFilitha zeRegex zoHlahlelo lukaGoogle (Ngemizekelo)